Falanqeeyayaasha ugu sareeya ee lagu soocay 2009 - Geofumadas
Sebtember, 2009 tabo cusub, Microstation-Bentley
Waxaan lagu casuumay si ay u daboosho ay dhacdo in Charlotte, halkaas oo ay mashaariic ugu weyn waxaa lagu Abaal marin on abuurnimo sanad 2009 ah, oo hore loogu yaqaanay U Awards, hadda la waxyoonay. this waa la fulin doonaa laga bilaabo 12 ilaa 14 bisha Oktoobar.
Qeybaha 17 waxaan xiiseynayaa Koburgalka iyo horumarinta dhulalka, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyay ee loo soo magacaabay:
1. SIG ee Cáceres, Spain.
Kani waa horumarinta GIS, oo ka socda Golaha Magaalada Cáceres, oo ay ka mid tahay in loo diro internetka iyada oo loo marayo Publisher Geoweb. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay 200,00 diiwaanka, oo ku saabsan khariidado 500, mashruuc Juquraafi ah oo ay ku jiraan qaybaha 30 iyo wax ka badan sifooyinka 300.
2. Degmada Tiel, Netherlands
Horumarintaan waxaa ka mid ah in la isudhigo FlexiWeb, taas oo ah codsi gaar ah oo ka dhigaya dirista daabacaadda Geoweb oo soo jiidasho leh. Marka laga reebo xogta meelaynta, waxay sidoo kale ku jirtaa dukumiintiyada, sawirada iyo sawirrada shahaadooyinka 360.
3. Xarunta dabdamiska 29, oo ku taal California
Tani waa sigaar badan oo sigaar cabba, kaas oo isku dhejinaya naqshad haas oo leh codsiyo kala duwan oo ay ku jiraan CivilStorm iyo Autoft's AutoTurn. Horumarinta waxaa ka mid ah codsiyada leh 3D pdf, oo leh qaab sawireed muuqaal ah oo loo qaabeeyey Google Earth iyo qaab dhismeedka Sketchup!
Halkan waxaan ku soo koobayaa kooxdii kale ee ka soo qaybgalay qaybaha kale ee dalka (qaybo badan oo ay ka mid yihiin in ka badan hal gool oo loogu talagalay Mareykanka):
Buundooyinka Australia, USA, Vietnam
Dhismayaasha Boqortooyada Ingiriiska, USA,
Campus iyo garoomada diyaaradaha USA, India
Shabakadaha isgaarsiinta USA, Czech Republic
Mining & Metals Koonfur Afrika, Madagascar, Australia
Saliid iyo gaas New Guinea, USA, Ukraine,
Soo saarida tamarta Belgium, Spain, USA
Gaadiidka iyo tareenada Holland, Ingiriiska, Maraykanka, Sweden
Wadooyinka Australia, USA, Hindiya
Dhaqaalaha Jarmalka, USA, Turkey
Nidaamka Hidaha Boqortooyada Ingiriiska, USA, Australia
Nidaamyada qashinka Turkiga, Filibiin, Hindiya
Muuji USA, UK
Shaqada kooxda Boqortooyada Ingiriiska, USA, Brazil
Naqshad guud Ukraine, Boqortooyada Ingiriiska, Hindiya
Injineernimada dhismaha Boqortooyada Ingiriiska, Kuuriya, USA
Post Previous«Previous Ka soo daj khariiradaha waddada Google Earth
Post Next Maabe Global, oo la shaqeynaya dgnNext »